ပဲခူးရိုးမတွင် ပေ၂၀၀ခန့်ရှိချောက်အတွင်း ၆ဘီးယာဉ် ပြုတ်ကျတိမ်းမှောက် ၁၆ဦးသေဆုံး | Myanmar News Agency
Posted by MUNA on March 31, 2019
အုတ်တွင်း မတ် ၃၁
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင် ခြောက်ဘီးယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်ပြီး ချောက်အတွင်းထိုးကျသွားရာ လူ၁၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ (မတ်လ ၃၀ရက်) ည ၇နာရီခွဲခန့်အချိန်က အုတ်တွင်းမြို့နယ် ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သျှာရွာအနီးရှိ မရမ်းတံတား အုတ်တွင်း-ပေါက်ခေါင်းကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် ၇၁/၇အနီးတွင် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အုတ်တွင်းဘက်မှ ပေါက်ခေါင်းမြို့ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း တိုးမောင်(ခ)အောင်သူရ တောင်ငူမြို့နေသူမောင်းနှင်ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက် ကျော်မင်းထွန်း(၃၆)နှစ် ထန်းတပင်မြို့နေသူ အပါအဝင် ယာဉ်ပေါ်ပါရှိသူ စုစုပေါင်း ၄၀ ဦးခန့် က ယာဉ်အမှတ်YGN 9H/×××× FUSOအမျိုးအစား အဖြူရောင် ခြောက်ဘီးယာဉ်သည်မောင်းလာစဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းတွင်ရှိသော အချက်ပြရောင်ပြန်များအား တိုက်မိပြီး လမ်း၏ယာဘက်ခြမ်းရှိ ပေ(၂၀၀)ခန့်အနက်ရှိသောချောက်ထဲသို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့သည်။
ယာဉ်ပေါ်ပါရှိသူ(၁၆)ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး (၁၆)ဦးမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား အုတ်တွင်းပြည်သူ့ဆေးရုံသို့တင်ပို့ဆေးကုသထားရသည်။
” ဖြစ်တာက မနေ့ကညနေမိုးချုပ်ပိုင်းက ကားပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေကတော့ ဖုန်းတာဝါတိုင်ကေဘယ်လိုင်းကျင်းတွေတူးတဲ့အလုပ်သမားတွေပါပဲ။ လေးဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပါတယ်အကုန်။ သေတာကခုထိကားအောက်မှာထုတ်မရတာကနှစ်လောင်းရယ်အဲ့နားမှာ သေတာကဆယ့်သုံးလောင်းရယ် တောင်ငူဆေးရုံကိုတင်တဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်လည်းထပ်သေတော့ ၁၆ယောက် သေတာပေါ့။ ဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုအုတ်တွင်းဆေးရုံနဲ့တောင်ငူဆေးရုံကိုတင်ပို့နေပါတယ်။ ဒဏ်ရာရလည်း ၂၅ယောက် ဝန်းကျင်ရှိမယ် စပယ်ယာလည်းသေတယ် မောင်းတဲ့လူကတော့ပွန်းပဲ့ယုံလေးပဲ။ ခုအုတ်တွင်းစခန်းမှာဖမ်းထားပါတယ်” ဟု ရင်ခုန်သံရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဆရာတော်ဦးတေဇ က မိန့်သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အုတ်တွင်းမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်မဆင်မခြင်ပေါ့လျော့စွာမောင်းနှင်သူ တိုးမောင်(ခ)သူရအောင် ကို ယာဉ်(ပ)၂၅/၂၀၁၉. ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ဖြင့်ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်အရးယူထားသည်။
By – NSM
ဓါတ်ပုံ – ရင်ခုန်သံရှင်ရေးကူညီမှုအသင်း
အုတျတှငျး မတျ ၃၁
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး တောငျငူခရိုငျ အုတျတှငျးမွို့နယျတှငျ ခွောကျဘီးယာဉျတဈစီး တိမျးမှောကျပွီး ခြောကျအတှငျးထိုးကသြှားရာ လူ၁၆ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး လူမြားထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုမြား ရှိခဲ့သညျ။
ယမနျနေ့ (မတျလ ၃၀ရကျ) ည ၇နာရီခှဲခနျ့အခြိနျက အုတျတှငျးမွို့နယျ ပေါကျတောကြေးရှာအုပျစု ကွကျသြှာရှာအနီးရှိ မရမျးတံတား အုတျတှငျး-ပေါကျခေါငျးကားလမျးမိုငျတိုငျအမှတျ ၇၁/၇အနီးတှငျ မတျောတဆမှုဖွဈပှားခဲ့သညျ။
အုတျတှငျးဘကျမှ ပေါကျခေါငျးမွို့ဘကျသို့ ယာဉျမောငျး တိုးမောငျ(ခ)အောငျသူရ တောငျငူမွို့နသေူမောငျးနှငျပွီး ယာဉျနောကျလိုကျ ကြျောမငျးထှနျး(၃၆)နှဈ ထနျးတပငျမွို့နသေူ အပါအဝငျ ယာဉျပျေါပါရှိသူ စုစုပေါငျး ၄၀ ဦးခနျ့ က ယာဉျအမှတျYGN 9H/×××× FUSOအမြိုးအစား အဖွူရောငျ ခွောကျဘီးယာဉျသညျမောငျးလာစဉျ အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ လမျးတှငျရှိသော အခကျြပွရောငျပွနျမြားအား တိုကျမိပွီး လမျး၏ယာဘကျခွမျးရှိ ပေ(၂၀၀)ခနျ့အနကျရှိသောခြောကျထဲသို့ ထိုးကတြိမျးမှောကျခဲ့သညျ။
ယာဉျပျေါပါရှိသူ(၁၆)ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး (၁၆)ဦးမှာပွငျးထနျဒဏျရာမြားရရှိခဲ့သဖွငျ့ သဆေုံး၊ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိသူမြားအား အုတျတှငျးပွညျသူ့ဆေးရုံသို့တငျပို့ဆေးကုသထားရသညျ။
” ဖွဈတာက မနကေ့ညနမေိုးခြုပျပိုငျးက ကားပျေါပါလာတဲ့သူတှကေတော့ ဖုနျးတာဝါတိုငျကဘေယျလိုငျးကငျြးတှတေူးတဲ့အလုပျသမားတှပေါပဲ။ လေးဆယျပတျဝနျးကငျြလောကျပါတယျအကုနျ။ သတောကခုထိကားအောကျမှာထုတျမရတာကနှဈလောငျးရယျအဲ့နားမှာ သတောကဆယျ့သုံးလောငျးရယျ တောငျငူဆေးရုံကိုတငျတဲ့ကလေးလေးတဈယောကျလညျးထပျသတေော့ ၁၆ယောကျ သတောပေါ့။ ဒဏျရာရလူနာတှကေိုအုတျတှငျးဆေးရုံနဲ့တောငျငူဆေးရုံကိုတငျပို့နပေါတယျ။ ဒဏျရာရလညျး ၂၅ယောကျ ဝနျးကငျြရှိမယျ စပယျယာလညျးသတေယျ မောငျးတဲ့လူကတော့ပှနျးပဲ့ယုံလေးပဲ။ ခုအုတျတှငျးစခနျးမှာဖမျးထားပါတယျ” ဟု ရငျခုနျသံရှငျရေးကူညီမှုအသငျးမှ ဆရာတျောဦးတဇေ က မိနျ့သညျ။
ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အုတျတှငျးမွို့မရဲစခနျးမှ ယာဉျမဆငျမခွငျပေါ့လြော့စှာမောငျးနှငျသူ တိုးမောငျ(ခ)သူရအောငျ ကို ယာဉျ(ပ)၂၅/၂၀၁၉. ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ဖွငျ့ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့အရးယူထားသညျ။
ဓါတျပုံ – ရငျခုနျသံရှငျရေးကူညီမှုအသငျး
Previous Post အမျိုးသားသောက် ကိုယ်ဝန်တားဆေးအသစ် ကနဦးစမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပြီးစီးဟုဆို
Next Post မန္တလေးတွင် Online မှ ကာမစိတ်ကြွဆေးဝါးရောင်းချသူအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ